FM-ta Ethiopia, wakiilka Mareykanka waxay kawada hadlayaan biyo xireenka Renaissance - Wardeeq 24 TV FM-ta Ethiopia, wakiilka Mareykanka waxay kawada hadlayaan biyo xireenka Renaissance Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka FM-ta Ethiopia, wakiilka Mareykanka waxay kawada hadlayaan biyo xireenka Renaissance
FM-ta Ethiopia, wakiilka Mareykanka waxay kawada hadlayaan biyo xireenka Renaissance
Sanatarka Mareykanka Chris Coons iyo Wasiirka Arimaha Dibada ee Itoobiya Demeke Mekonnen ayaa wadahadalo yeeshay xili xiisad sii kordheysa ay udhaxeyso Itoobiya iyo wadamada dariska la ah Dooxada Nile, Suudaan iyo Masar, iyagoo kawada hadlaya Addis Ababa sii wadida buuxinta biya xireenkeeda Renaissance Dam sanadkii labaad.
Wadahadalladii ka dhacay Addis Ababa Axaddii waxay sidoo kale ka soo horjeedaan halka ay salka ku hayso walaaca Mareykanka ee la xiriira xiisadaha xadka ee u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan oo ka dhashay howgallada ay ciidamada Itoobiya ka wadeen gobolka Tigree oo ay u direen qaxooti ku qulqulaya Suudaan isla markaana qeylo dhaan u diray bulshada caalamka.
Biden waxay u dirtay senetarka Mareykanka itoobiya arimo bini’aadanimo
El-Sisi ee Masar ayaa booqday Suudaan wadahadalka biya xireenka Niil
Suudaan waxay si rasmi ah u codsaneysaa dhexdhexaadin afar dhinac ah oo ka socota GERD
Mekonnen wuxuu sheegay inuu u xaqiijiyay sarkaalka Mareykanka ah in dalkiisa ay ka go’an tahay Midowga Afrika maalgalinta wadaxaajoodka biyo xidheenka Grand Ethiopian Renaissance Dam. Itoobiya waxay dhowr jeer wada hadallo la yeelatay Suudaan iyo Masar, kuwaas oo ka baqaya in dhismaha GERD uu horseedo biyo la’aan ka jirta dalalkooda.
Addis Ababa waxay ku adkaysanaysaa in GERD ay muhiim u tahay horumarinteeda dhaqaale.
Itoobiya ayaa billowday buuxinta kaydka biyo-xidheenka gadaashiisa sanadkii hore ka dib markii wada-xaajoodyadu ku guuldareysteen inay ka soo baxaan heshiis sharci ah oo ku saabsan hawlgalka GERD.
Saraakiisha Itoobiya waxay rajaynayaan in biyo xireenka, oo hadda in kabadan seddex meelood meel la dhameystiray, uu gaari doono awood dhalinta awood buuxda sanadka 2023, taasoo gacan ka geysan doonta sidii malaayiin dadkeeda ah looga saari lahaa saboolnimada.
Horaantii bishaan, Itoobiya waxay diiday soo jeedinta Suudaan ee ahayd in la helo afar koox oo caalami ah oo dhexdhexaadiya muranka, oo ay ka mid noqon doonaan Qaramada Midoobay, Mareykanka, Midowga Yurub iyo Midowga Afrika si loo xaliyo wadaxaajoodka hakadka galay.
Coons, oo sidoo kale ah ergayga gaarka ah ee Mareykanka u fadhiya Itoobiya, wuxuu xaqiijiyay iskaashiga istiraatiijiyadeed ee Mareykanku la leeyahay Itoobiya wuxuuna ku baaqay in xal loo helo xiisadda gobolka Tigray.
Kumanaan qof ayaa ku dhintey Tigreega dagaalka kadib, boqolaal kun ayaa laga qaxay guryahooda waxaana jira cunno, biyo iyo daawo gabaabsi oo ka jirta Tigray, oo ah gobol ay ku nool yihiin in ka badan shan milyan oo qof.
Previous articleFulkaano muddo dheer seexanaysay oo nolosha Iceland ku soo noolaatay
Next articleTaiwan ayaa lumisay laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah sida shilka dhacay